20 “Uma kwenzeka uphuma uya empini uyolwa nezitha zakho bese empeleni ubona amahhashi nezinqola zempi,+ isizwe esinabantu abaningi kakhulu kunawe, akumelwe usesabe; ngoba uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe,+ unawe.+ 2 Kuyothi lapho ususondele empini, umpristi asondele akhulume nabantu.+ 3 Athi kubo, ‘O Israyeli, yizwa, namuhla nisondela empini ukulwa nezitha zenu. Ningazivumeli izinhliziyo zenu zibe novalo.+ Ningesabi noma nibaleke ninetwetwe noma niqhaqhazele ngenxa yazo,+ 4 ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uhamba nani ukuze anilwele ezitheni zenu anisindise.’+ 5 “Izikhulu+ nazo kumelwe zikhulume nabantu, zithi, ‘Ngubani owakhé indlu entsha kodwa ongakayivuli? Makahambe abuyele endlini yakhe, funa afe empini kube omunye umuntu oyivulayo.+ 6 Ngubani otshalé isivini kodwa ongakaqali ukusisebenzisa? Makahambe abuyele endlini yakhe, funa afe empini kube omunye umuntu oqala ukusisebenzisa.+ 7 Ngubani othembisé owesifazane umshado kodwa ongakamthathi? Makahambe abuyele endlini+ yakhe, funa afe empini omunye umuntu amthathe.’ 8 Izikhulu kumelwe zithi kubantu, ‘Ngubani owesabayo nonengebhe?+ Makahambe abuyele endlini yakhe, ukuze angabangeli izinhliziyo zabafowabo ukuba zigcwale amanzi njengenhliziyo yakhe.’+ 9 Kuyothi lapho izikhulu seziqedile ukukhuluma nabantu, zimise izinduna zamabutho ngaphambi kwabantu. 10 “Uma kwenzeka usondela emzini uyokulwa nawo, kumelwe uwazise imibandela yokuthula.+ 11 Uma ukunikeza impendulo yokuthula futhi uye wakuvulela, kumelwe bonke abantu abatholakala kuwo babe ngabakho ukuze benze umsebenzi ophoqelelwe, bakukhonze.+ 12 Kodwa uma ungakwenzi ukuthula nawe,+ futhi empeleni ulwa nawe futhi kudingeke ukuba uwuvimbezele, 13 uJehova uNkulunkulu wakho naye ngokuqinisekile uyowunikela esandleni sakho, futhi kumelwe ushaye bonke abesilisa abakuwo ngosiko lwenkemba.+ 14 Kuphela abesifazane nabantwana abancane+ nemfuyo+ nakho konke okungenzeka kube kulowo muzi, yonke impango yawo uyoziphangela yona;+ kumelwe uyidle impango yezitha zakho, uJehova uNkulunkulu wakho azinikele kuwe.+ 15 “Yileyo ndlela oyokwenza ngayo kuyo yonke imizi ekude kakhulu nawe engeyona ingxenye yemizi yalezi zizwe. 16 Yimizi yalezi zizwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika yona njengefa okungamelwe ulonde kuyo noma yini ephefumulayo,+ 17 ngoba nakanjani kufanele uyinikele ekubhujisweni, amaHeti nama-Amori, amaKhanani namaPherizi, amaHivi namaJebusi,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile; 18 ukuze banganifundisi ukwenza ngokwazo zonke izinengiso zabo, abazenzile konkulunkulu babo, bese ngempela nona kuJehova uNkulunkulu wenu.+ 19 “Uma kwenzeka uvimbezela umuzi izinsuku eziningi ngokulwa nawo ukuze uwuthumbe, akumelwe uchithe imithi yawo ngokuyiphakamisela imbazo; ngoba kufanele udle kuyo, akumelwe uyigawule,+ ngoba umuthi wasendle ungumuntu yini ukuba wena uwuvimbezele? 20 Kuphela umuthi owaziyo ukuthi akuwona umuthi odliwayo, yiwona okufanele uwuchithe, kumelwe uwugawule wakhe ngawo izivimbezelo+ kulowo muzi olwa nawe, uze uwe.